Global Voices teny Malagasy » Aleon’ny Akademiam-Panjaka Espaniola ” Ny Lehilahy Rehetra ” Toy izay Ny ”Lehilahy Sy Ny Vehivavy Rehetra” · Global Voices teny Malagasy » Print
Aleon'ny Akademiam-Panjaka Espaniola ” Ny Lehilahy Rehetra ” Toy izay Ny ”Lehilahy Sy Ny Vehivavy Rehetra”
Voadika ny 01 Septambra 2016 8:36 GMT 1	 · Mpanoratra Mary Aviles Nandika (fr) i Maéva Rose, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Espaina, Fiteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Sary nalaina tao amin'ny kaonty Flickr-n'i Camisetas ao SANTI OCHOA ary naverina nozaraina nampiasàna ny Creative Commons lisansa.
Ny Real Academia Española (RAE , Akademiam-Panjaka Espaniola), ilay andrim-panjakana miandraikitra ny fampanaraham-penitra ny teny espaniola, dia nizara ny fijeriny momba ny fampiasana ny fiteny fanasokajiana ny maha-vehivavy na maha-lehilahy ao amin'ny teny toy ny hoe ”ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra” na ”mpiasa lahy sy mpiasa vavy” izay, rehefa miresaka momba ireo olona lahy sy vavy dia lasa lehilahy rehefa anaty hamaroana.
Ny tranonkala Clases de Periodismo  dia mamintina toy izany ny tatitr'ilay andrim-pianjakana izay mitondra ny lohateny hoe ”Fanavakavahana ara-pananahana eo amin'ny fiteny sy ny fahitana ny vehivavy” nosoratan'i Ignacio Bosque :
Ny tatitra avy amin'ny RAE dia mitsikera ireo torolàlana vaovao mifantoka amin'ny fampiasana tsy manavaka ny teny notrandrahana ao Espaina, nataon'ireo Oniversitera, sendika sy ny governemanta isam-paritra, izay manome hevitra, ohatra, ny hampiasana ny teny toy ny ”maha-olompirenena” eo amin'ny toeran'ny ”olom-pirenena” na ” ny maha-mpampianatra” eo amin'ny toeran'ny ”ny mpampianatra (manondro ny sokajy lehilahy anaty hamaroana) ” mba hiresahana ireo vondrona ahitana lahy sy vavy.
Tao aorian'ny nitsikerany ary nanasongadinany ny tsy fisian'ny fetezan'ny fizarana ho roa ny karazana iray – toy ny amin'ny tranga ” ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra ” voalaza eto – mba hisorohana ny heverina ho fananaraotana fanavakavahana, ary koa ny fampiasana tafahoatra ny famantarana ” @ ” mba hapetaka amin'ny marika maha-vehivavy ”a” ary ny an'ny lehilahy ”o”, ny mpahay teny dia nihevitra ireo zavatra ao amin'ny torolalana ankehitriny ho toy ny tsy azo ampiasaina.
Araka ilay tranonkala dia mampahafantatra i Ignacio Bosque fa ”ny fampiasana ny maha-lahy hanondroana ireo sokajy roa dia tena miorim-paka ao anatin'ny rafitra fitsipi-pitenena” espaniola ary tsy misy dikany ”ny fanerena [ ny fiovan]-‘ny rafitry ny teny”.
Fa atao inona izany fanitsiana izany? Tsy vaovao ilay olana, efa nanindry ny toerana misy azy tamin'ny 2012 ny RAE.
Ny tranonkalan'ny gazety arzantina La Nación  dia nizara ny manaraka io lohahevitra io :
Voasarika tamin'ny fampiasana tsy mitsaha-mitombo ny fanararaotana fiteny ao Amerika latina ny Akademiam-Panjaka Espaniola (RAE) : lahatsoratra iray ao amin'ny lalam-panorenana venezoelianina no miresaka ny ”lehilahy sy vehivavy venezoelianina”, ary ny filoha [arzantina] Cristina Kirchner dia manomboka foana ny kabariny amin'ny filazana hoe ” ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra”.
Ny fironana ”mpanavao” dia efa manana ohatra maro amin'ny anaran'ny tenany, manampy ireo misolo tena ny lalam-panorenana ao Venezoela sy ny filoha Kirchner. Ny 15 may lasa teo, ny Puerta del Sol dia notafihan'ny vondrona mpanao fihetsiketsehana izay, mba hanasongadinana hoe vehivavy sy lehilahy tezitra ary sorena no mandrafitra azy, dia nilaza ny tenany ho [hetsika] ataon'ireo tezitra sy sorena – lahy sy vavy – [amin'ny teny espaniola l@s indignad@s]. Miaraka amin'ny marika arobazy mba tsy manavaka ny rehetra.
Mikasika izany, ny tranonkala Enfoque Jurídico  [Fijery araka ny lalàna] dia manoro hevitra ny tsy hampiasàna ny marika @, satria tsy marika ara-pitenenana izy io ary faran'izay tsy azo tononina ihany koa.
Manindry ny ” Fampiasana ny fiteny tsy manavaka’, filàna sosialy ve?  ” ao amin'ny lahatsorany i Marcela Zeledón :
… ny fiteny tsy manavaka dia manondro ireo fanehoankevitra am-bava na an-tsoratra mampiasa voambolana tsy lahy tsy vavy raha azo atao, na koa mampiseho ny maha-lahy sy ny maha-vavy. Misoroka ihany koa ny fampiasàna bontolo ny maha-lehilahy anatin'ireo toedraharaha na asa izay ahitana vehivavy sy lehilahy.
Asongadin'i Zeledón fa ny tanjona dia tsy ny hanampy ”os ” na ” as ” amin'ny teny rehetra, fa ny hampiasa teny sy hevitra tsy miangatra izay ahitana sy manasongadina kokoa ny fahitàna ireo vondrona rehetra hita ao anatin'ny fiarahamonina. Araka ny mpanoratra, ny ohatra iray dia ny ”handaozana ny fampiasana ny teny ”olona” [lehilahy], izay fantatra fa ampiasana ho an'ny olona erantany”. Marcela Zeledón dia mihevitra fa ity fomba fanao ity dia manakona ny fisian'ny ankizy sy ny vehivavy. Ny mety kokoa dia ny hanondroana ireo sokajy roa amin'ny fampiasana teny toy ny ” olona ”, ”olombelona”, ”ny maha-olona”, ”ny olombelona”.
Nanoratra lahatsoratra iray mikasika izany i Sanra Russo, ho an'ny Página 12  eo ambanin'ny fanamarihana ”Momba ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra  ”. Atorony amin'izany fa nosoniavin'ireo akademisiana 23 avy amin'ny RAE io tatitra io ( izay ny telo fotsiny no vehivavy) :
Miady indray ny RAE manohitra firosoana iray ho amina karazana efa narovan'ny vondrona maro mpiaro ny maha-vehivavy efa nandritra ny taona maro, izay mandrafitra torolàlana momba ny fanavakavahana ao anatin'ny teny […] toherin'ireo mpiaro ny vehivavy ny fampidirana ny maha-vehivavy ho ao anatin'ny teny iombonana manondro ny lehilahy, ary izay dia tsy misy antony, na fomba iray mety hilazàna zavatra, na fanambaràna mitombina. Izahay vehivavy dia voatelina ao anatin'ireo teny manondro ny lehilahy anaty hamaroana (mpiasa, olom-pirenena, namana, vahiny, sns : ireo teny rehetra ireo izay nato ho an'ny sokajy lehilahy, dia mitelina ny sokajy vehivavy ). Fa tsy ny fomba fiteny no mamaritra ny tena zava-misy, fa ny mifanohitra amin'izany.
Ary mbola manampy izy :
Ireo mpahay momba ny teny sady mpiaro ny vehivavy dia milaza fa io fampidirana an-terisetra ny maha-vehivavy ho anatin'ny maha-lehilahy io dia endrika iray amin'ny fanilikilihana ao anatin'ny fiteny. Ny hoe ao anatiny sy voasarona anatin'ny teny iombonana anondroana ny lehilahy dia manery ireo vehivavy hanontany tena in'arivony eo amin'ny fiainany : ” Izaho ve izany resahana izany?”, nefa ny lehilahy tsy mba mandalo izany.
Toa izany koa, manamarika i Russo fa ”ireo toerana izay tsy mahazo aina amin'ny teny dia manova tsikelikely azy, ao anatinà hetsika voajanaharin'ny fanitsiana sy fampiavahana”.
Na izany aza, toa mba nanohana ny fanapahankevitry ny RAE ireo mpampiasa Twitter :
La RAE opuesta al “todos y todas” de la constitución de #Venezuela , CFKirchner y Correa. @flarenasec  @ConyLane  @skueffner 
Ny RAE manohitra ny ”lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra”-n'ny lalam-panorenana Venezoeliana, CFKirchner sy Correa [Ny filohan'ny Repoblikan'ny Ekoatera].
Hatramin'ny rahoviana ilay ”ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra” ? Tsy namaky ireo fitsipiky ny RAE angaha izy ireo…? Fanampin'izany, toa mampihomehy ilay izy.
La #RAE  carga contra el “todos y todas” “gramatical y patriarcal” @mujerpalabraNET  http://t.co/R5rX8euaPt  desde CM Browser)
Maneho feo manohitra ny ” lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra ” ”ara-pitsipi-pitenenana sy ny fanomezan-danja ny fahefan-dehilahy” ny RAE.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/01/85314/
 Real Academia Española (RAE: http://www.rae.es/
 Clases de Periodismo: http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/12/18/la-rae-explica-por-que-esta-en-contra-del-todos-y-todas/
 Ny tranonkalan'ny gazety arzantina La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1453900-la-real-academia-espanola-contra-el-todos-y-todas
 Enfoque Jurídico: http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2384
 Página 12: http://Fotos de Camisetas de SANTI OCHOA
 Momba ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-189263-2012-03-10.html
 November 11, 2015: https://twitter.com/titoramia/status/664318923811233792
 October 25, 2015: https://twitter.com/nanatejada/status/658257262872559616
 August 11, 2015: https://twitter.com/MeigaLobis/status/631103022257545216